Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu ABO (KHR-ABO) -
bilisummaa November 29, 2013	Leave a comment
Gaafa: Sadaasa 29, 2013 Lak: SAD/022/2013
Date: November 28, 2013 No. SAD/022/2013
Koreen Hojii Raawwachiiftuu ABO teessuma isaa idilee taasifateen dhimmoota dhaabaa, naannoo fi guddina siyaasa oromoo gadi fageenyaan xiinxalee jira. Adeemsa qabsoo sabaa ABOn durfamu jabinaa fi anqinoota qabu baldhinaan gamaaggamamee jira. Muldhati dhaaba keenyaa qabsoo sabaa galmaan gahuuf murteessaa ta’uu fi dhalooti haarawaan dhimma qabsoo sabaa keessatti qooda isaaf malu akka fudhatu, muldhata ABO haala anjawaa kan uume ta’uu isaa gadi fageenyaan ilaalamee jira.
Muldata dhaaba keenyaa galmaan ga’uuf anqinoota akka hoogganaatti qabnu irra aanuuf madda rakkoo mudatiin baldhinaan ilaalamee falli hunde qabeessa itti kennamee jira. Hojilee karaa siyaasaa, ijaarsaa fi hojii dippilomaasii turan baldhinaan xiinxalamee jira. Koreen Hojii Raawwachiiftuu ABO adeemsa qabsoon keenya keessa jiruu, ciminaa fi dadhabbina akka dhaabaattis ta’ee mooraa qabsoo oromoo keessa jiru roga hundaan xiinxalee jira. Tokkummaa Oromoo fi Qabsa’otaa jabeessuun guyyaa bilisummaa Oromoo kan shaffisiisuuf murteessaa ta’uun isaa ilaalamee jira.
Akkasuma hariiroon dhaabni keenya dhaabbilee siyaasa Oromoo fi kan biro wajjin qabu xiinxalamee jira. Hariiroon dhaabni keenya ABOn dhaabbilee Oromoo fi dhaabbilee siyaasaa kan boroo wajjin qabu hunde qabeessaa fi dhimma tarsiimoo ta’uu isaa hubatamee jira. Bifuma kanaan muldhata keenya galmaan ga’uuf haariroon dhaabbilee siyaasaa gidduu jiru, keessumaa dhaabbileen Oromoo walitti dhiheenyaan hojachuun murteessaa ta’uun isaa irratti waliif galamee jira. Kana irraa ka’uudhaan murtee kanaa gadii dabarsuudhaan teessuma isaa injifannoon xumuratee jira.
1. Muldhata dhaaba keenyaa galmaan ga’uuf tarsiimoo fi toftaa waltajiin yeroo gaafatutti dhimma bahuudhaan muldhata dhaaba keenyaa galmaan ga’uuf hooggansa bu’a qabeessa kennuuf murteerra ga’amee jira. Kana gochuuf hooggana dimokraatawaa fi hirmaannaa qabsa’otaa akksumas deeggartoota mara karaa mirkaneessuun hojiitti hiikuuf qophii ta’uu isaa murteessee jira.
2. Jaallan kana dura qabsoo sabaa keessatti gumaachaa fi gahee olaanaa qabaachaa turan, eessa iyyuu haa jiraatanii, kan lubbuun jiranis ta’ee kan haarsaa kaffalan kabajaa fi ilfina isaaniif malu kennuudhaan imaanaa isaanii galmaan ga’uuf akkuma kana dura irratti hojatamaa ture ammas goototaa fi duree qabsoo keenyaa kabaja olaanaa kenninaaf.
3. Afuura oromummaa (normalization)dhaabbilee siyaasaa oromoo fi caasaa hawaasa oromoo gidduutti fiduuf alduree tokko malee dhaabni keenya ABOn ni hojata. Akka hoogganaatti kaayyoo eebbifamaa kana galmaan ga’uuf murannoon hojanna.
4. Dhaabbilee siyaasa oromoo gidduu garaa garummaan siyaasaa jirus dhaabni keenya galii isaan dhaabbataniif kabajaa qaba. Dhimma waloo irratti waliin hojachuuf ABOn qophii dha. Garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta’ee dhimmoota irratti waloodhaan hojannu tokkos ta’ee lama dhaabni keenya hojachuuf qophii dha. kanaaf dhaabbileen siyaasa oromoo adeemsa wal diineffachuu fi wal qoollifachuu keessaa bahanii dhimma qabsoo sabaa irratti qabxilee waloon hijachuu dandeenyu irratti tumsaa fi irree tokkummaa qabsoo akka jabeessinu waamicha goona.
5. Jaallana kana dura sababa gara garaan dhaaba isaanii ABO irraa of moggeessan ykn qeeqaa fi ilaalcha gara garaan mufatan, akka dhaaba isaanitti deebi’anii gahee isaanii gumaachan waamicha goona. Jaallan qabsoo kana keessatti gahee olaanaa qabaachaa turan akka ammas dhaaba isaanitti deebi’anii gumaacha isaanii bahan hooggani keenya alduree tokko malee isaan simachuuf qophii dha.
6. Caasaleen hawaasaa, beektotii, haayyotii fi jaarsoliin oromoo akkasumas qabsoo sabaa kana keessatti gumaacha muldhataa fi umurii isaanii namootiin itti fixan tokkummaan mooraa qabsoo oromoo akka jabaatuuf gahee isaanii akka bahan waamicha dhiheessina.
7. ABOn gochaa sukkaanneessaa mootummaan woyyannee Ummatoota Itoopiyaa biyya keessaa fi biyya alatti irraan gayaa jiruu jabeessee balaleefata.
8. Jaarmiyoolee sirna woyyannee hiddaan buqisu’uun sirna dimokiraasii dhugaa, mootummaa sagalee wayaaba irratti hundayee (majority rule) mirga ilma namaa fi ol’aantuumaa seeraatiin bulu ijaarutti amanu hundaa woliin hojjatuuf waamicha goona.
Previous Ajaaiba Yeroo!
Next Baqattota Oromoo biyya amba kessatti darama jiran bira dhaabbachuu dirqama Oromo maraati!